12 ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှုအပေါ် ILC မူကြမ်းဆောင်းပါး၏အနှစ်
နေအိမ် / ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင် / 12 ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှုအပေါ် ILC မူကြမ်းဆောင်းပါး၏အနှစ်
22/11/2013 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဒါဟာပြည်နယ်တာဝန်အပေါ်အလုပ်ကိုပြီးမြောက်ရန်နိုင်ငံတကာဥပဒေကော်မရှင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆယ်စုနှစ်လေးခုယူ, ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည့် 2001.
ဤလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေများ၏ codification နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အလွန်အရေးပါသောခြေလှမ်းကိုယ်စားပြု, စာချုပ်များ၏ပညတ္ပေါ်ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းအဖြစ်အလားတူအရေးပါမှုနှင့်အတူ. ဤရွေ့ကားဆောင်းပါးများနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့်ထိုသို့ဆင်ခြေသို့မဟုတ်မျှတမှုများ၏ပြဿနာများကိုကိုဖုံးလွှမ်း; မတရားမှုများအတွက်လျှော်ကြေး, တာဝန်၏ဆုံးဖွတျခ, နှင့်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ပွညျထောငျစု၏ရပ်တည်မှု.
အခွင့်အာဏာ binding မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, အဆိုပါ ILC မူကြမ်းဆောင်းပါးများအလွန်အားကောင်းစွာလက်ခံရရှိပြီ, မကြာခဏကကိုးကားထားပါသည် တရားရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုများများစွာခုံသမာဓိခုံရုံး. အချို့စာချုပ်အစိုးရများ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, အဆိုပါအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်း, ဘယ်လာရုစ်လွဲပြီးဥရောပအားလုံးကိုတိတ် acceded သောရန်, တာဝန်များ၏မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြ.
အောက်မှာ Filed: ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင်, တရားမျှတရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး, အီတလီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ပြည်သူ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ, ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှု